Uthuli oluBrown yigacha RPG entsha apho usebenzisa isicwangciso | I-Androidsis
Zigxininise kumaqhinga nakumlingo we-RPG kunye ne-gacha Brown Dust
UManuel Ramirez | | Imidlalo ye-Android
Uthuli oluBrown ngumdlalo omtsha ovela kwi-NEOWIZ omele i-RPG yawo kunye nokuba sisihloko esinobuchule obungummangaliso. Oko kukuthi, ngokungafaniyo neminye imidlalo eza nesitayile sama-manga kunye ne-RPG, uyakuceba isicwangciso-qhinga sakho ngokuseka amaqhawe akho embindini wedabi ukuze xa ucofa kwiqhosha ukuqala idabi, bona ngokwabo bakhusele kwaye bahlasele ukuphelisa utshaba.
Inayo yokulwa esekwe ekujikeni, nangona ngenene siya kukukhathalela ukubeka iziqwenga ngokungathi yibhodi yechess. Umdlalo ovela empuma ukuza kusonwabisa namaqhawekazi akhe amahle, iimenyu zayo ezithandekayo kunye nomdlalo ongapheliyo apho sinokutya iiyure kunye neeyure zokudlala. Isihloko ekufuneka sithathele ingqalelo indlela yesicwangciso.
1 Umdlalo we-gacha kakhulu, kodwa unayo
2 I-PvP, iitumente, abaphathi kunye nentsebenziswano kwi-Brown Dust
3 Mnumzana RPG gacha
Umdlalo we-gacha kakhulu, kodwa unayo
Sibhekisa kwigacha yokuba kufuneka sifumane amakhadi amatsha abatsha amaqhawe esinokuwasebenzisa ukucwangcisa umlo olandelayo kungenjalo. Uthuli oluBrown lubonakaliswa ikakhulu leli candelo kunye nesicwangciso esiza kucetywa. Kuba sinako ukujongana neemfazwe ezininzi kunye neqela lethu lamagorha abekwe ngobuchule njengoko sithanda.
Ndiyathetha, kuya kufuneka uchithe imizuzu embalwa uyila indlela yokubeka iiyunithi ezahlukeneyo, ukuze ezi, xa zilungelelaniswe kwibhodi yomdlalo, ziqale ukujongana namaqela eentshaba. Ingathi ungumqeqeshi weqela lebhola ekhatywayo apho uthatha isigqibo seqela kunye nendawo elikuyo, emva koko sele umiselwe umdlalo.
Ngesi sizathu siya kuba nethuba lokufumana amakhadi amatsha, amajoni, zonke iintlobo zezakhono nokunye okuninzi okusilindeleyo ngoBrown Dust. Ukuba sithi niza kukwazi ukujongana ngaphezulu kwamanqanaba ayi-1.200, sele ninokuqonda ukuba kutheni ekuqaleni kwesi sithuba sithe niza kuba neeyure neeyure zokuzonwabisa.
I-PvP, iitumente, abaphathi kunye nentsebenziswano kwi-Brown Dust
Uthuli oluBrown asisweli nto kwaye sinayo nembali yokuba iqala ngokubulawa kuka-Emperor Altair II. Lo msitho uza kubangela ungquzulwano lwezopolitiko olukhulu kwaye apho siza kungeniswa khona ukusuka kumzuzu wokuqala. Kwaye ukuba singunyana womlawuli obuleweyo, unokucinga ukuba uya kuyiphosa phi yonke into ...
Emva kwelona candelo lisisiseko lomdlalo kunye nesifundo esincinci esincinci, siya kuqala ukuthatha inxaxheba Co-op raids, imingxunya, umxholo wePvP, kunye nabaphathi behlabathi apho kuya kufuneka sisebenzise ezona zicwangciso-qhinga zethu ngobulumko zidityaniswe namajoni ethu.
Oko kwathethi, ngelixa indlela yokulwa nesicwangciso isenokuba sisiseko ekuqaleni, njengoko sidlala siyakufumanisa ukuba iindlela zinzima kakhulu. Sinokude sithathe isigqibo soku-odola nganye yokulwa kwaye sihambe sicinga ukuba sinayo ukuya kuthi ga kuma-300 eemenenja ezikhoyo ukuya kwinqanaba kwaye nangaphezulu.
Mnumzana RPG gacha
Uthuli oluBrown lusishiya sinencasa emnandi emlonyeni, nangona singathanda Iya kusebenzisa ububanzi obugcweleyo besikrini obuvunyelwa zezo zihambileyo nge 18: 9 umlinganiso wezinto. Ngokukodwa kuba nesicatshulwa sivela ngobukhulu obuncinci, obudodobalisa amava okudlala kwaye siphantse sinyanzele ukuba sicinge ukuba kungangcono sidlale kwithebhulethi.
Umdlalo olishumi ngokuchanekileyo kwaye kuzo zombini ezi uyilo lomlinganiswa, useto, iziphumo, ingoma Kwaye nezibonwayo kumlo ogcweleyo ziyangqinelana nemidlalo ebalaseleyo kolu didi. Uya kuyithanda kuwo onke amanqanaba kwaye ubalaselise amazwi aseAsia anika into entsha. Isihloko esithi isondela iKhowudi yeAlchemist o kuGrand Chase, ke ukuba niyabathanda uhlobo olo, kufuneka.
UBrown Dust ubetha iGoogle Play Store njengecebo leRPG gacha apho kufuneka sazi ukuba masenze njani izigqibo ezomeleleyo zokuqamba owona mgangatho uphezulu weemenenja. Isihloko esiphuma eklasini kwaye kufanelekile ukwenziwa kuwo onke amanqanaba.
Icandelo lakho lobuchule ekulweni
Umxholo omninzi kunye neendlela ezahlukeneyo
Eyona idlalwe ngokuhambahamba ngezikrini ezinkulu kunye neetafile
Isibindi Esithoba-I-RPG yeqhinga
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Zigxininise kumaqhinga nakumlingo we-RPG kunye ne-gacha Brown Dust
Ungalicima njani ngokusisigxina iqela kuWhatsApp
Jongana nomnye umdlali neqela lakho lamagorha kwi-FRAG Pro Shooter kwaye ube ngowona mdlali ubalaseleyo emhlabeni